Ski uye Snowboard Goggles ULLER - THE INDIAN FACE
Ndiudze kuti unodzidzisa sei uye ini ndokuudza iwe iwe kukwikwidza
Uller® Icho chikamu chepamusoro-chekuita chigadzirwa chakagadzirwa uye uye nevatambi vepamusoro. Zvese zvigadzirwa zvedu zvakagadzirwa pasi pechiitiko chevamhanyi vekunze vatambi vanoisa pamuviri izvo zvavanoda mune zvigadzirwa zvedu uye izvi zvinogadzirwa kuzadzisa zvese zvinodiwa. Zvigadzirwa zvinoyedzwa zvichivatora kuenda padanho repamusoro rekunetsekana kuona kuti vachazadzisa zvinotarisirwa panguva yekushandisa kwavo mune yehunyanzvi uye yeamateur mitambo tsika.
MASKI NEMACHNETIC LENS X-POLAR
Iyo Wall Bhuruu / Tsvuku 225.00 €
Rusvingo Ruchena / Dema 225.00 €
Iyo Wall Red / Nhema 225.00 €
Iyo Rusvingo Nhema / Orenji 225.00 €
Iyo Wall Dema / Mirror 225.00 €
Snowdrift Green / Nhema 225.00 €
Snowdrift Yakachena / Tsvuku
Snowdrift Yakachena / Tsvuku 225.00 €
Snowdrift Bhuruu / Ndarama
Snowdrift Bhuruu / Ndarama 225.00 €
Snowdrift Nhema / Bhuruu
Snowdrift Nhema / Bhuruu 225.00 €
Snowdrift Nhema / Yero 225.00 €
MASKI NEMAFOTOCHROMATIC LENSES X-POLAR
Avalanche Grey / Nhema 134.99 € 225.00 €
Avalanche Girinhi / Dema
Avalanche Girinhi / Dema 225.00 €
Avalanche Bhuruu / Dema
Avalanche Bhuruu / Dema 225.00 €
Vertical Muchena / Mutsvuku
Vertical Muchena / Mutsvuku 225.00 €
Vertical Dzvuku / Black
Vertical Dzvuku / Black 225.00 €
FIXED LENS MASKI X-POLAR
Cornice Nhema / Nhema
Cornice Nhema / Nhema 110.99 € 185.00 €
Cornice Muchena / Ndarama
Cornice Muchena / Ndarama 185.00 €
Cornice Bhuru / Dema
Cornice Bhuru / Dema 110.99 € 185.00 €
Cornice Rose / Nhema
Cornice Rose / Nhema 185.00 €
Cornice Yero / Nhema
Cornice Yero / Nhema 185.00 €
Cornice Nhema / Bhuruu
Cornice Nhema / Bhuruu 185.00 €
Cornice Nhema / Mirror
Cornice Nhema / Mirror 185.00 €
Blizzard Nhema / Tsvuku
Blizzard Nhema / Tsvuku 120.00 €
Blizzard Nhema / Cherry
Blizzard Nhema / Cherry 120.00 €
Blizzard Grey / Tsvuku
Blizzard Grey / Tsvuku 71.99 € 120.00 €
Blizzard Tsvuku / Mirror
Blizzard Tsvuku / Mirror 120.00 €
Blizzard Chena / Ndarama
Blizzard Chena / Ndarama 71.99 € 120.00 €
Blizzard Dema / Yero
Blizzard Dema / Yero 120.00 €
Blizzard Dema / Dema
Blizzard Dema / Dema 120.00 €
Avalanche Orange / Nhema 185.00 €
Avalanche Orange / Bhuruu 185.00 €
Avalanche Bhuruu / Grey
Avalanche Bhuruu / Grey 185.00 €
Avalanche Nhema / Yero 185.00 €
Avalanche Ichena / Cherry
Avalanche Ichena / Cherry 185.00 €
Avalanche Muchena / Mutsvuku
Avalanche Muchena / Mutsvuku 185.00 €
Cliff Bhuruu / Tsvuku 120.00 €
Cliff Bhuruu / Yero
Cliff Bhuruu / Yero 120.00 €
Cliff Nhema / Cherry
Cliff Nhema / Cherry 120.00 €
Cliff Dema / Grey
Cliff Dema / Grey 120.00 €
Cliff Muchena / Bhuruu
Cliff Muchena / Bhuruu 120.00 €
Vertical Tsvuku / Grey
Vertical Tsvuku / Grey 185.00 €
Vertical Mindi / Grey
Vertical Mindi / Grey 185.00 €
Vertical Mint / Nhema
Vertical Mint / Nhema 110.99 € 185.00 €
Vertical Nhema / Bhuruu
Vertical Nhema / Bhuruu 185.00 €
Vertical Nhema / Yero
Vertical Nhema / Yero 185.00 €
Vertical Nhema / Cherry
Vertical Nhema / Cherry 185.00 €
Vertical Muchena / Mutsvuku 185.00 €
Dutu White / Bhuruu 120.00 €
Dutu Nhema / Grey 120.00 €
Dutu Dema / Cherry 120.00 €
Dutu Dzvuku / Bhuruu 120.00 €
Dutu Bhuruu / Yero 120.00 €
Dutu Nhema / Nyoro 71.99 € 120.00 €
GOGGLES UYE SAYI NESHOUBOARD MASKI YEVARUME NEVAKADZI
GADZIRWA NEKUDZIDZA FREERIDERS.
Isu tinodada kuve chikamu che Indicom Brands, Optical fashoni kambani inoronga matatu ayo mabhurandi: The Indian Face®, Hanukeii® uye Uller®, yekupedzisira iri chiratidzo cheboka. Uller® inonyanya kugadzirwa, kugadzirwa uye kugoverwa kweprimiyamu zvigadzirwa zvemafashoni, kusanganisira ski masikiuye masiketi echando akagadzirwa nemhando yepamusoro. Icho chiri chikonzero ichi kuti pa www.theindianface.com iwe unowana dzakasiyana siyana brand brand ski goggles Uller® yemhando yepamusoro yauinayo. Zvese zvehunyanzvi zvakatemwa zveedu echando magogorosi uye ski masiki anowanikwa mune rondedzero yeumwe neumwe muunganidzwa. Nekudaro, isu tinogona kukuudza iwe kuti isu tine akawanda mamodheru ephotochromic ski goggles, ski goggles ane anoshandurika magnetic lenses, uye zvakare ski goggles. polaryakasimudzwa, zvinoenderana nekuwanikwa kwega kwega kuunganidza mumatura edu.
YEMAHARA TECHNOLOGY YENYANZVI NESEMI-NYANZVI
Kwemakore, Uller® yakave yakashongedzwa korona mukati meboka seyedu yepamusoro yePrimiyamu, uye nemhando yepamusoro muchikamu chayo. Muchokwadi, ese the ski goggles echiratidzo Uller® iyo yatinopa mukati www.theindianface.com Izvo zvakagadzirwa pasi pechiitiko chevatambi vanonzwisisa zvekutanga-ruoko zvido zvevachiri uye vanoenda pachando. Izvi zvinoreva kuti iwo masiki epasi akagadzirwa na freeriderhongu, kune vamwe freeriders, ndichigara ndichiedza kudarika zvinotarisirwa nemumwe nemumwe weavo vatambi vehunyanzvi uye semi-nyanzvi vatambi. Muchokwadi, isu tinoramba tichiedza mhando yemasikisi edu epasi uye, gore rimwe nerimwe, tinounganidza dhata rese kuti tigadzirise zvinoenderana nekushandurwa, kudzamara tazosangana nekupfuudza izvo zvinodikanwa nevatasvi vevatambi vepamusoro uye ma freerides.
Isu vatinoshanda navo bhizinesi vanoona kuti unosarudza Ski magogorosi Uller® ndiyo yako yakanyanya kunaka sarudzo. Kutenda kune yayo-ye-iyo-tekinoroji tekinoroji, isu tinokwanisa kupa risingapfuure tsananguro uye isingakundike danho rekujekesa kune vese vatambi vanovimba zvigadzirwa zvedu. Yedu High Tech lenzi Performance Optics X-POLAR Ivo vanowedzera zvinoyevedza ruvara uye musiyano kune yega yega yedu ski goggles uye ski goggles. Muchokwadi, iko kujekesa kukuru kwemagirazi edu echando kunowedzera musiyano uye kuvimbika kwemavara akatikomberedza patinoita mitambo yechando. Nenzira iyi, ski masiki Uller® kupa kurodza mushe kupfuura zvakajairwa kunyangwe mune zvinotyisa mamiriro.
Sechiratidzo, chinangwa chedu chagara chiri chekupa zvakanakisa Magirazi eSkipamusika, ingave photochromic ski goggles kana magnetic inoshandurudzwa lens ski goggles, kana kungoti ski goggles polaryakasimudzwa, zvinoenderana neyakaunganidzwa yega yega. Nekudaro, edu ese ski goggles anovandudza maonero ezve nharaunda uye zororo rerunyararo uye runyararo rwevose skier.
KUKOSHESA KWAKANAKA KWEMARI
Iwo mamodheru emasikisi emasikisi aunowana pane yedu webhusaiti anosiyana muhukuru, ruvara uye chimiro, asi imwe neimwe yadzo inopa mhando yepamusoro uye yakasimba. Isu tinopa dzakasiyana siyana sarudzo, kusanganisira mamwe mamodheru eeski goggles. polarAkasimudza magirazi echando, magineti anoshandurudzwa nemagineti ane mapikicha echromic, pamwe nemagirazi echando evana, zvinoenderana nekuwanikwa kwesitoko yedu, iyo yakagadzirwa seyunisex dhizaini uye mashandiro epamusoro anowanikwa pamusika. Uye zvakare, isu tinopa edu mamodheru e Ski magogorosiUller® nguva nenguva nezvikwereti zvakakura munzvimbo yedu yekubvakacha. Isu tinotora ino nguva kukukoka iwe kuti utarise ino chikamu, uye ubate zvakanakisa zvechadenga zvinopa. Kana muchikamu chemasiki uchikupa iwe usingawani chakakunakira iwe panguva iyoyo chaiyo, tinokukoka kuti utarise kune mamwe ese maunganidzwa edu emasikisi anowanikwa pane webhusaiti yedu, muchikamu chikuru ichocho.
Iko kunaka uye kuita kwepamusoro kwemaitiro edu eefotochromic ski goggles, edu magirazi magogisi, magineti anoshandurika lenzi uye ski magogorosi polarizadas vakamisa chiratidzo chedu pakati pezvakanakisa zvigadzirwa zvechando goggles pamusika zvinoenderana nevatinoshanda navo bhizinesi, kunyanya nekuda kwehunhu / mutengo wehuwandu. Pakati pedu dzakasiyana siyana ski goggles isu takagadzira kuunganidzwa kwefotochromic ski goggles uye zvakare ski goggles polarhoists iyo inozvimiririra-inoenderana neyiripo mwenje mwenje, nemisiyano ichibva kuCAT1. kuCAT3. Kune rimwe divi, isu tinodada nekupa mamwe emhando yemagineti anoshandurudzwa lens ski goggles, ayo anotendera iyo skier kuti ikurumidze kuchinja malenzi uye kusarudza chikamu chaanoda zvinoenderana nemamiriro ekunze uye nemwenje mamiriro ezuva iro.
ZVAKAWANDA ZVAKAWANDA NEZVINHU ZVINOKOSHA KWAUNOSARUDZA
Pakati pese mabhenefiti uye mabhenefiti anopihwa nemagetsi Uller®, ayo asiri mashoma, tinogona kuratidza zvinotevera:
Ski goggles ine yakanyanya kureruka uye nyaradzo.
Dhizaini uye saizi inofungidzirwa varume nevakadzi.
Technology X-POLAR ine UV-400 dziviriro uye Dual Layer AntiFog yakapetwa kaviri sisitimu yekudzivirira fogging.
Yemukati kufefetedza system ine anti-condensation.
Anti-Slip Strap tepi yekugadzirisa kwakakwana kwemagirazi kune ngowani.
Chimiro chakagadzirwa ne thermoplastic polyurethane yehupamhi hwekureruka.
Mimwe yemagirazi edu ekusvetuka anosanganisira anoshandurudzwa emagetsi magirazi. Aya mamodheru anouya negirazi remazuva ane zuva muCAT. 3 uye yakajeka yemazuva ekuonekwa kushoma muCAT.
Mazhinji emamodeli edu anowira pasi pechikamu chegogi gogi polarakasimudzwa, ndatenda polarachisimudza magirazi ake.
Yedu ski goggles inouya ne microfiber chifukidziro uye zvitambi zvinosanganisirwa uye, mazhinji acho, aine yekuwedzera yakaoma butiro kuti ugone kuzvichengeta zvakachengeteka.
Nguva nenguva tinotanga zvigadzirwa zvemaski nemitengo mikuru munzvimbo yedu yekubvakacha.
ZVIKURU ZVINOGONESESA, HUKURU SKI ZVINOTAURA.
Muchitoro chedu chepamhepo iwe unogara uchiwana yakakura ski inopa pane mazhinji edu mamodheru emagoggles nemasikisi echando. Uye chinhu chakanakisa ndechekuti timu yedu yekutengesa nguva nenguva inogadziridza nzvimbo yekubhururuka padandemutande redu kana mwaka wekutenga ski watanga. In The Indian Face® uye Uller® isu tinoda kugadzira uye kugadzira ski masikikune vatasvi uye freeriders kubva kuSpain uye kutenderera pasirese. Muchokwadi, ese magogorosi anowanikwa pane yedu webhusaiti uye zvakare mune yedu ski nzira yekutengesa yakafuridzirwa nemasikirwo, zviito, kushanya uye shamwari… Kana isu tichisvetuka tinonzwa tiri vapenyu, isu tiri vapenyu.
GOGGLE NESKI MASKI YEVARUME
Pane yedu webhusaiti www.theindianface.com tinodada nekupa zvigadzirwa Uller®, chiratidzo chehunyanzvi cheiyo yemafashoni boka Indicom Brands, yakanangana nekugadzira, kugadzira uye kugovera masiki evarume vechikepe nemagirazi emagetsi polarAkasimudza Premium murume. Neichi chikonzero, edu ese evarume ski goggles uye evarume snowboard goggles anogadzirwa ne uye uye freeriders neayo epamusoro hunyanzvi hwekuita, anogara achitsvaga vatambi vepamusoro, nyanzvi uye semi-nyanzvi, kuti vabudirire kuita kwavo kwepamusoro pavanenge vachiita mitambo.
Varume vedu ski goggles akakosha pakuchengeta chiono chevashambadzi mumamiriro akaipisisa panguva yeFreeride tsika. Masiki ese evarume echikepe Uller® inowanikwa pane yedu webhusaiti yakagadzirwa kubva kune izvo zvinodiwa nechikwata chedu che freeriders, iyo inoda hukuru kubva pachigadzirwa, zvese muzvinhu uye munyaradzo. Isu tinozvirumbidza mwaka wega wega nekugona kugadzira uye nekupa zvirinani uye zvakavandudzika zvakasiyana zvevarume ski goggles uye ski goggles. polarmurume akasimudzwa.
Uller® chiratidzo chemitambo chakasikwa uye nevanoda zvemitambo yepamusoro. Uller, Pakati pezvimwe zvigadzirwa, inovandudza zvimwe ski masiki murumeizvo zvine hunyanzvi hwekuita. Naizvozvo, isu tinopa akasiyana siyana emhando yepamusoro emhando yepamusoro echirume ski goggles nemask, zvakagadzirwa ne uye zve freeriders, uye inogadzirwa nezvinhu zvakanakisa pamusika. Chimwe nechimwe chazvo chinovimbisa mashandiro akanaka uye kutendeseka kwakanyanya mune zvakanyanyisa mamiriro panguva yechando uye freeriding.
Nguva nenguva, isu tinogadziridza edu emasikisi masiketi kuti tipe zvigadzirwa zvakanakisa mune ino chikamu. Mimwe miunganidzwa yedu inosanganisira photochromic varume ski goggles, vamwe vanopa ski goggles polarvarume vakasimudzwa uye, kunyangwe, mazhinji edu akaunganidzwa anogona kuvimba Ski goggles rinoshandurika lenzi murume. Nekudaro, iwo ruzivo rweimwe neimwe modhi inowanikwa pane yedu webhusaiti ichagara ichienderana neyedu repertoire yemasikisi emasikisi egore iro, uye kuwanikwa kwesitoko yedu.
Isu tinosimbisa kuti varume vedu vese ski goggles vane tsananguro yatinotsanangudza hunhu hweakataurwa magogira. Nenzira iyi, kunyangwe hazvo varume vedu vese magirazi echando ari maPrimiyamu ekupedzisira-magumo, haasi ese maunganidzwa edu ane mabhenefiti akafanana. Naizvozvo, tinokukoka kuti utarise zvakanaka izvo zvinoratidza kuti isu tinosiya pane chimwe nechimwe chigadzirwa muchitoro chedu chepamhepo, kuti ugone kusarudza chaizvo ski masiki murume izvo zvinogutsa nenzira kwayo zvaunoda senge skier.
Kana isu tichifunga nezve zvakanakira zvinopihwa nemabhiza evarume ski goggles Uller®, ayo asiri mashoma, chimwe chinonyanya kuzivikanwa ndechekuti ivo vanopa tekinoroji yepamberi mu optics pasi rose muchikamu chayo. Isu tinotaura nezve High Tech Performance Optics X-POLAR, iyo irimo mune mazhinji emadzimai edu echikepe magirazi emhando anowanikwa pane webhusaiti yedu, zvinoenderana nezvinotsanangurwa uye kuwanikwa kwega kwega kuunganidzwa Chaizvoizvo izvi, pamwe chete nemhando yedu yepamusoro yezvinhu uye kugadzira, uye kugovera kwedu uye kuendesa sevhisi, ndizvo chaizvo zvinomisikidza varume ski goggles. Uller® kubva kune mamwe mabhureki anowanikwa pamusika nhasi. Saizvozvo, sezvatinoita mu The Indian Face®, Uller® irwo mucherechedzo unoshandisa nzira dzinoenderera dzekuvandudza uye, nekudaro, nguva nenguva inovandudza zvigadzirwa zvese nemasevhisi kuti irambe ichienderana nevatambi vepamusoro.
Optics tekinoroji X-Polar yevarume vedu ski goggles ndiyo chaiyo muenzaniso weiyo kuda kuramba uchivandudza. Chokwadi, echikwata chevarume maski ski Uller® iyo inoratidzira lens tekinoroji X-Polar, ipa hukuru hwakanyanya hunowedzera musiyano uye kuvimbika kwemavara. Vakadaro magirazi ekukwiza ski polarakasimudzwa murume, uye zvakare kwete polarakasimudzwa, vane mukana uyu wakasarudzika, uyo unovandudza maonero enharaunda uye kurerukirwa. Yedu photochromic varume ski goggles, evarume vedu magineti anochinjaniswa lens ski magoggi uye, kazhinji, edu akasiyana siyana eeski magogorosi, anopa tsananguro yakakwana uye kujekesa kunodarika zvakajairwa, uye izvo zvinopa musiyano unoshamisa uye ruvara.
Rangarira kuti iwe unogona kutenga Ski magogorosi yemhando yepamusoro soro muchikamu chedu chevanosvetukira muchikepe uye uwane zvinopihwa zvevasikana zvinokushamisa.
Ndiwo masiki echikadzi echiratidzo Uller® Vachakwanisa musoro wangu nengowani zvakanaka?
Chokwadi, edu ese evarume ski goggles ane anodzora elastic tambo yemhando dzese dzemusoro nengowani. Muchokwadi, mazhinji edu maunganidzwa evarume vechikepe chegoggi ane anti-slip tepi kuti uve nechokwadi chekubata kwakasimba pamusoro wako nemadziro eheti, kuitira kudzivirira kufamba uye kusimuka. Rangarira kuti zvakakosha kuti iwe utenge masiketi evarume ehukuru hwakakodzera uye neyakaenzana zvakakwana kubva ipapo, uchifunga izvi zvinowirirana mukusarudza kwako magogorosi emeso evarume vako, unodzivirira kuwana mwenje unoratidzwa kubva kumativi nepasi. Ehe, zvakakoshawo zvakaenzana kuti malensi aunosarudza ave neazvino tekinoroji kuitira kuti varume vako echando magogorosi agadzikane nemamiriro ekunze uye usazove nematambudziko kana uchibata nemamiriro ekunze akashata uye chengetedza nyaradzo zvachose nguva.
Akadii mafuremu egirazi eiyo ski goggles murume brand Uller®?
Iwo malenzi evarume vedu ski goggles brand Uller® inowanikwa muchitoro chedu chendaneti https://theindianface.com/pages/gafas-de-esqui-snowboard-uller uye muchikamu chevanosvetukira muchikepe mu www.theindianface.com Isu tinovagadzira neakanakisa zvinhu kuti vawane kukurira kukuru uye kuomarara pakurwisa zvinokanganisa, pamwe nekudzivirirwa kwakanyanya kubva kumwaranzi yeultraviolet uye hwakanakisa hunhu mune chako chiratidzo. Nenzira iyi, yedu ski masiki polarSki goggles dzevanhu, pamwe nevarume vedu magineti anoshandurudzwa lens ski goggles uye edu evarume photochromic ski goggles anonyanya kugadzikana, asinganetsi uye akareruka, uye anopa nyaradzo yakakura kupfuura mamwe echirume emagirazi echando pamusika.
Inoita brand man blizzard masks Uller® vane antifog tekinoroji?
Chokwadi, varume vedu ski goggles, kusanganisira edu echirume photochromic ski goggles uye edu evanhurume magineti anochinjika lens ski goggles ane yemukati anti-condensation kufefetedza system, iyo inowana inoenderera uye inofambira mberi mweya kudzokorodza kuvimbisa kwakanyanya kugona kuoneka nguva dzese.
Ndingawane kupihwa pane zvevarume ski goggles Uller® pane webhusaiti ye The Indian Face?
Isu tinopota tichimisikidza zvinopihwa nevanhurume vezv ski uye kukwidziridzwa kwakasarudzika pamasikisi evasikki pawebhusaiti yedu. Iwe unowanzo kuwana dzakasiyana zvigadzirwa zvigadzirwa The Indian Face® uye brand Uller® mune yedu Outlet Ski murume, kusanganisira varume ski goggles, zvinoenderana nekuwanikwa kwechitoro chedu uye nenguva yegore.
Chii chandinofanira kufunga nezvacho kana ndichitenga varume vangu ski goggles / evarume blizzard goggles?
Paunenge uchitenga ski yechirume kana echando evarume goggles iwe unofanirwa:
Tora tarisiro yakanaka kune iyo firita chikamu iyo iyo lensi yevarume vako ski mask ine uye uye kana kana kana iine mukana wekuchichinja. Chinhu chinokurudzirwa zvakanyanya kuve nemagineti evarume anochinjika malenzi ski goggles ayo iwe aunogona kusarudza iyo lenzi iwe yauchazoshandisa zvichienderana nezuva, nguva uye mamiriro ekunze aunotevedzera. Imwe sarudzo ndeyekusarudza mifananidzo yemurume yechchchikiki ski inosiyana pakati peCAT1. uye CAT 3, ndiyo inonyanya kushandiswa.
Kusarudza ski mask polarHooks dzevarume kana varume ski goggles dzinoenderana neski uye helmeti ngowiti.
Simbisa kuti magirazi echando evarume vako ane tepi ine anti-slip system yekuona kubatisisa pamadziro eheti uye kudzivirira kufamba kwavo uye kutama. Rangarira kuti kumanikidzwa kwaunofanirwa kunzwa kunofanirwa kunge kuri kwakakodzera, kusanyanya kana kusununguka.
Iwe unofanirwa kusarudza mafomu eUnisex asina kunyanyisa kukura kana kudiki. Nevarume vako ski goggles, tarisa inoonekwa ndima iwe yaunowana nekutarisa divi uye kumusoro / pasi. Kana iwe ukacherekedza kuti iwe une yakaderedzwa munda wekuona, ichi chifukidzo chinogona kunge chiri chidiki kwazvo. Varume ski goggles ane unisex mafuremu ndiyo yakanyanya kunaka sarudzo.
Kune masiki echikadzi echisikigo polaryakasimudzwa, saka imwe sarudzo yakanaka kusarudza ski goggles polarvakasimudza varume kana iwe uchida kuti ive neichi mukana uye kubvisa iwo maratidziro echiedza anogona kukonzerwa nezuva kana uchirova chando.
Iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekuti varume vako ski goggles vane anti-fog system. Uller® (iri kutengeswa uye inowanikwa pa https://theindianface.com/pages/gafas-de-esqui-snowboard-uller) inopa mamodheru ane malenzi ane kakapetwa kaviri kekuputsa iro rinopisa zambuko uye nekudaro unodzivirira mhute uye kukwirisa, zvichikubvumidza iwe kuve nekujeka kwakakwana panguva yekusvetuka mune chero mamiriro ekunze.
Nguva dzose funga nezvekunyaradzwa kwako uye kuva nehutano hwakanaka paunenge uchitenga varume vako ski goggles.
Sarudza varume ski goggles muchirongwa chevaravara chinokodzera maitiro ako nehunhu.
Tora mukana wevarume vedu ski nzira yekubuda kuti utenge magirazi emhando yepamusoro neakanaka ski evanopa.
Izvo zvinosanganisirwa neyangu ski goggles magineti anochinjika lenzi murume wechiratidzo Uller®?
Bhokisi rega rega uye kesi seti yemurume edu emagetsi inoshandurika lens ski goggles anouya nezvinhu zvinotevera:
Blizzard mask murume Uller®.
2 lenzi: 1 yezuva uye imwe yekutaridzika kuderera.
Zvakaoma kutakura kesi.
Usazviomesera microfiber pabutiro.
Ndehupi hunhu hwakakosha hunofanirwa kuve neakanakisa echikepe chevarume?
Yakanakisa ski goggles evarume inopa garandi yehunhu. Izvo zvakakosha kuti ako masiki ech ski ave neEuropean Union mhando vimbiso neEC mucherechedzo.
Impact inodzivirira zvinhu zvekuchengetedzeka kukuru kana uchidzidzira mitambo yechando muchando. Chinhu chinodzivirira senge isu chatinoshandisa mune edu evarume ski goggles nemask Uller®, inopa huwandu hwakanyanya hwekuchengeteka uye, nekudaro, rugare rwepfungwa kana uchidzidzira waunofarira mutambo wechando. Sezvineiwo, yako ski mask evarume vako inofanirwawo kuve nekusimbiswa munzvimbo yematembere uye nekukomberedza kwemhino kuitira dziviriro huru munzvimbo dzinonetsa.
Kudzivirirwa kwe UV - 400. Ngoro dzechikepe dzevarume dzinofanirwa kudzivirira kuona kwako pamazuva ane zuva, uye kunyangwe ane makore, kubva kumwaranzi yezuva ye ultraviolet.
Ipa maonero ekuona. Rangarira kuti skiing inoda nzvimbo yakawandisa yekuona kuti vanoona muchadenga vachiuya nekumhanya kwazvo kuburikidza nenzvimbo dzinotevera, pamwe nerekuponeswa kwemakomo nedzimwe mhando dzetsaona kana nzvimbo dzenzvimbo.
Iwo malenzi evarume vako ski goggles anofanira kunge akafara kuitira kuti ivo vatendere iwe kuti uve nekuonekwa kwakanaka. Uye zvakare, maalensi evakadzi vechikepe anofanirwa kuve nemhando yakanaka yekusiyanisa uye kupinza, zvikasadaro hauzotsvedza pamateru mune akanakisa mamiriro.
Wagadzirira kutenga rako rinotevera revanhu ski goggles / echikadzi ski goggles? Rangarira kuti isu tinoramba tichiedza mhando yezvigadzirwa zvedu uye tinotora data rese, gore rimwe nerimwe, kuti tikwanise kuvandudza zvinoenderana nemagirazi echikepe evarume vedu, kudzamara tazadzisa zvido zvevatasvi vanonyanya kuda. Hatina mubvunzo kuti yedu Ski goggles murume Iwo ari 100% zvigadzirwa zveprimiyamu zvepamusoro soro. Zvionere wega zvakanakira edu echando maski kuunganidzwa, uye uwane edu makuru evarume ski zvinopa mune evarume ski nzira yekutengesa yewebhu webhusaiti!
DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWE
En The Indian Face tine zvakasiyana siyana zvigadzirwa Uller®, chiratidzo chehunyanzvi cheiyo yemafashoni boka mutambo-wakasununguka Indicom Brands. Isu tinozvirumbidza nekusanganisira dzakasiyana siyana ski masiki mukadziine kuita kwakakwira kune vedu vese vateereri vechikadzi. Saizvozvo, Uller® inonyanya kugadzirwa, kugadzirwa uye kugoverwa kwezvakanakisa ski masiki mukadzi nemurumepamusika nhasi.
Zvinoenderana nevatinoshanda navo, pa www.theindianface.com iwe uchawana akanakisa mafashoni zvigadzirwa zvemitambo yechando, yakagadzirirwa kugadzirisa zvinodikanwa zvakanyanya zvevatambi vedu, vese varume nevakadzi. Naizvozvo, pakati pavo tinosanganisira yakasarudzika sarudzo yemadzimai echikepe echikadzi ane musanganiswa wakakura wemavara uye masitaera. Zvinoenderana nekuwanikwa kwavo mudura redu, mazhinji emamodeli e Ski goggles mukadziInowanikwa pane yedu webhusaiti iwe unogona zvakare kuvawana mune yedu yevakadzi ski outlet chikamu, matiri isu kuvhura vakadzi ski zvinopihwa nguva nenguva zvinoenderana nenguva yegore.
Kana iwe ukashinga kuziva, nehasha, ndeapi madzimai echikepe echando anowanikwa muchitoro chedu chepamhepo, tinokukoka kuti uenderere mberi nekuverenga! Heino runyorwa rweakanyanya hunhu hunoratidza edu evakadzi ve ski goggles:
Vakadzi vedu echando magogorosi anowanzove ane Unisex saizi uye modhi. Neiyi nzira, ivo vanogona kushandiswa nevakadzi uye zvakare nevarume. Isu tine makuru uye madiki mamodheru, ayo anosarudzwa nevarume nevakadzi zvinoenderana nezvavanoda.
Nguva nenguva, zvinoenderana nekuwanikwa kwesitoko yedu, isu tinopa kuunganidzwa kwevakadzi magineti anoshandurika lenzi ski goggles ayo ari nyore kugadzirisa mumasekondi mashoma. Aya maunganidzwa evakadzi vech ski goggles anouya nemaviri lenzi anosanganisira: 2 kwemazuva ane zuva muCAT. 1 uye imwe, yakajeka, kwemazuva ekuonekwa kushoma muCAT. 3.
Zvinoenderana nekuwanikwa kwedu, isu tinopawo kuunganidzwa kwemadzimai echisiki emasikisi ane malenzi ane tekinoroji. X-POLAR uye Dual rukoko kaviri rukoko hurongwa Anti mhute(anti fog), iyo inodzivirira vakadzi ski goggles kubva fogging kumusoro.
Masiki edu evakadzi vech ski, kusanganisira magirazi emagetsi polarVakadzi vechikepe ski, uye edu emuchadenga echikadzi echando magoghi anouya neUV-400 dziviriro pane ese maalensi avo.
Ese maunganidzwa edu evakadzi vech ski goggles ane yemukati yekufefetera system ine anti-condensation. Izvi zvinobvumidza kudzokorodza kunoenderera kwemweya mukati mevakadzi maski echikadzi, uye kunovimbisa kuoneka kwakaringana.
Ose edu echikadzi emagetsi echando anosanganisira asiri-slip tepi (Anti-kutedzemuka Sungira) yekugadzirisa kwakakwana kwemasikisi echikadzi echikadzi / masiki echikadzi echikadzi ane maheti ane saizi dzakasiyana.
Vakadzi vedu vech ski goggles vane furemu yakagadzirwa ine yakanyanyisa mwenje thermoplastic polyurethane.
Zvese zvevakadzi ski goggles, kunyangwe vari ski goggles polarVakadzi vema ski goggles, sekunge vari mapikicha echromic echikadzi emagetsi, kana echikadzi magineti anochinjaniswa lens ski goggles, anosanganisira microfiber chifukidziro uye zvitambi zvinosanganisirwa.
Isu tinogadziridza kuunganidzwa kwedu kwemadzimai echisiki emasikisi kazhinji kupa zvigadzirwa zvakanakisa muchikamu icho. Mimwe miunganidzwa yedu inosanganisira ski goggles polarKune vakadzi, vamwe vanopa vakadzi photochromic ski goggles, uye kunyangwe mazhinji edu maunganidzwa anogona kuve vakadzi magineti anochinjika lens ski goggles. Tsananguro yemhando yega yega yemhando inogara ichitsamira pane repertoire yevakadzi maski echikwata chegore iro, uye kuwanikwa kwesitoko yedu.
Kana iwe uchida kuziva zvakadzama kuti edu masiki echikadzi ari sei, isu tinosimbisa kuti yega modhi ine rondedzero yatino tsanangura hunhu hweakataurwa Ski goggles mukadzi. Nenzira iyi, kunyangwe hazvo vakadzi vedu vese echando magoggi ari maPrimiyamu ekumusoro-kumagumo, haasi ese maunganidzwa edu ane akafanana mabhenefiti. Neichi chikonzero, isu tinokukoka iwe kuti utarise zvakanaka izvo zvinoratidza zvechigadzirwa chimwe nechimwe muchitoro chedu chepamhepo, kuti ugone kusarudza chaizvo masiki evarume echikadzi anonyatso kusangana nezvinodiwa zvako semuchadenga.
Yedu yekupa yezvigadzirwa uye echando masiki anowanzove akasiyana kwazvo. Muchokwadi, sezvatakambotaura, zvinoenderana nezvakasiyana muunganidzwa zviripo pawebhusaiti ye The Indian FaceIwe unogona kuwana emadzimai emafotochromic echando magirazi anotangira kubva muchikamu 1 kusvika 3, kana vakadzi emagetsi anoshandurudzwa lens ski goggle maunganidzwa, ayo anosanganisira maviri lenzi, imwe kubva kune yega yega chikamu chakataurwa.
Sezvatatsanangura pamusoro, tinokuyeuchidzai kuti isu mune edu akaunganidzwa mamodheru asingaverengeke ehukuru hwakasiyana uye mavara anoenderana nezvinodiwa nevarume nevakadzi. Naizvozvo, ese mamodheru echikadzi ski goggles uye Ski goggles mukadzi marca Uller® zvakare unisex uye, nekudaro, dhizaini yavo uye kugadzira kwavo kwakagadzirwa nenzira yekuti vanokwana uye kugadzirisa zvakakwana kune varume nevakadzi. Kana iwe uchida kutenga chigadzirwa kubva kuunganidzwa edu e ski masiki mukadzimarca Uller® unogona kuzviita zvakachengeteka mukati www.theindianface.com. Uye zvakare, tinokukoka iwe kuti usvike chikamu chedu chevakadzi ski chiteshi uye unakirwe nezvose zvakaderedzwa, kukwidziridzwa uye zvinopihwa zvechikadzi izvo zvatiinazvo kwauri.
Ndeipi iri online yekutenga nzira yevakadzi ski goggles mukatiwww.theindianface.com?
Iyo yekutenga pamhepo maitiro evakadzi vedu ski masiki inokurumidza kwazvo, yakasununguka uye yakapusa, sezvazvinoitika kune zvimwe zvese zvigadzirwa zviripo pane webhusaiti yedu. Ukangodzvanya pachikamu uye wosarudza masiki echikadzi echikadzi aunoda kutenga, iwe unongo wedzera iwo kune yako yekutengera ngoro pamwe nerako ruzivo rwekutumira. Chinhu chinotevera kuchave kubhadhara ako ski goggles nenzira inoshanda uye yakachengeteka kuburikidza neyedu yekubhadhara gateway ine SSL chitupa. Iyo nguva yekuendesa yako ski masiki mukadzi zvinoenderana nenyika yekutakura.
Ndingawane here mamodheru emadzimai emagetsi anoshandurika lenzi ski goggles pawebhusaiti ye The Indian Face?
Nguva nenguva isu tinotanga zvigadzirwa pawebhusaiti yedu Ski goggles rinoshandurika lenzi mukadzi izvo zvatinoita kuti zviwanikwe kune vedu vese vatambi uye maIndia Midzimu. Nekudaro, kuwanikwa kwayo kunoenderana zvakananga kudura redu. Rangarira kuti mhando iyi yemadzimai echikadzi echando ane malenzi maviri, imwe yemazuva ane zuva uye imwe yemazuva mashoma ekuonekwa. Iwo malenzi evakadzi emagetsi anoshandurika lenzi ski goggles anowanikwa pane webhusaiti yedu anotendera nyore uye nekukurumidza lenzi shanduko mune isingasvike maviri masekondi.
Ndingawane here mamodheru eefotochromic evakadzi vechikepe goggles pawebhusaiti ye The Indian Face?
Isu tinowanzo kushambadzira kuunganidzwa kwe photochromic ski goggles mukadzipane yedu webhusaiti, inowanikwa kune vese vatambi vedu uye Indian Midzimu. Isu tinosimbisa kuti kuwanikwa kwayo kunoenderana zvakananga kudura redu. Rangarira kuti edu lensi yefotochromic polarHoists dzinoshandura kupenya kwadzo kune dzakasiyana mamiriro ekunze. Ese edu echikadzi echikichiki echikadzi ski goggles anosiyana kubva kuCAT.1 kuenda kuCAT. 3. Nekuda kwekuita kwavo kwakawanda, edu emuchadenga echikadzi echikepe magoggi anozokupa kuita kwakanyanya kwazvo zvese pamazuva ezuva uye pamazuva ane mamiriro ekunze akaipa.
Ndingawane here mamodheru eeski goggles polarized mukadzi pawebhu ye The Indian Face?
Isu tinogara tichipa mhando dzeski goggles polarized mukadzi pawebhu ye The Indian FaceIzvo zvese zvinoenderana nekuwanikwa kwesheya yedu uye maunganidzwa atinotangisa gore iro. Zvakare, iwe unogona kuwana mamwe edu emagetsi ski mamodheru polarVakadzi vanosimudza pamitengo yakadzikiswa muchikamu chevakadzi chechikepe sezvo, panguva yemwaka wekutengesa, zvese masiki zvine vakadzi ski zvinopihwa zvinowanikwa kune vatengi vedu muchikamu ichocho.
Iko sei yemukati kufefetedza system yeiyo brand echikadzi ski masiki Uller®?
Masiki echikadzi echikadzi Uller® ive neyemukati anti-condensation yekufefetera system iyo inofarira kudzokororwa kwemhepo zvishoma nezvishoma. Magirazi echando evakadzi vedu anovimbisa kufefetedza nguva dzese panguva yemitambo. Uye zvakare, magirazi evakadzi vechikepe vanopa mukana wepamusoro wevatambi vehunyanzvi uye freeriders vakachengeteka panguva yebasa ravo mumakomo.
Ndeye vakadzi ski goggles Uller® ngowani inoenderana here?
Chokwadi, magadzirirwo eedu ski masiki mukadziIzvo zvakagadzirwa kuti zvienderane neski uye helmeti ngowiti. Muchokwadi, iyo anti-slip tepi ye ski masiki mukadzi de Uller® yakagadzirirwa kupa yakakwana kugadzirisa kweizvi Ski goggles mukadzi nengowani. Uye zvakare, isu tinogadzira ese edu mamodheru munzira yakanyanyisa kuita, tichifunga nezvekukodzera pamwe neruzhinji rwe helmets pamusika. Unogona kushandisa zvese zvakakosha zvekuchengetedza musoro wako panguva imwe chete.
Isu takagara tichisarudza kupa Ski goggles mukadzinekupokana kwakanyanya uye kuomarara pakukanganiswa, kudzivirirwa kwepamusoro pamwaranzi yezuva, uye nhanho yepamusoro yekupinza nekuonekwa. In The Indian Face Isu tinodada nekuita kuti zviwanikwe kune vedu vanofamba muchadenga akawanda maunganidzwa e Ski goggles mukadziizvo zvakagadzirirwa kuvadzivirira kubva kune yakanyanya kushata mamiriro ekunze avanogona kuwana mumakomo, kupfuura zuva, semuenzaniso, mvura, mhute, mhepo. Izvo zvinhu zve Ski goggles mukadziiyo isu yatinosanganisira muzvikamu zvedu zvakagadzirirwa kumira chero shanduko yemamiriro ekunze uye chero kurohwa kana kudonha kuitira kuti tipe dziviriro yakanyanya pazvinhu zvakadaro. Rangarira kuti imwe neimwe yemamodeli edu e Ski goggles mukadzi marca UllerUnogona kuzvitora mune yedu yechikadzi ski nzira yekutengesera pane yedu webhusaiti, kwaunogona kuwana yakanakisa echikadzi ski zvinopihwa zvemwaka uno.